ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား - ဝီကီပီးဒီးယား
ရန်ကုန်မြိုကို ပတ်၍ မောင်းနှင်သည့် ရထားလမ်းကြောင်း အမည်
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားသည် ရန်ကုန်မြို့ပြဧရိယာအတွင်း ပုံမှန်အလုပ်ဆင်းသူများအတွက် အားထားရာ မြို့တွင်းရထားလမ်းကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ မီးရထား၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပြီး ၄၅.၉-ကီလိုမီတာ (၂၈.၅-မိုင်) ရှည်လျားကာ ၃၉ ဘူတာပါဝင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ဝန်းကျင် မြို့နယ်များကို ရန်ကုန်မြို့ပြဧရိယာနှင့် ဆက်သွယ်ပေးထားသည်။ မြို့ပတ်ရထားသည် အကြိမ် ၂၀ ခန့်ပြေးဆွဲပြီး လက်မှတ် ၁၀၀,၀၀၀ မှ ၁၅၀,၀၀၀ ခန့် နေ့စဉ်ရောင်းချရသည်။ မြို့ပတ်ရထား တစ်ပတ်ပြည့်စီးနင်းနိုင်ရန် အချိန် ၃ နာရီမျှ ကြာမြင့်ပြီး မြို့ပတ်ရထားစီးနင်းခြင်းဟာ ရန်ကုန်မြို့လူနေမှုဘဝကို အထင်းသားမြင်တွေ့နိုင်မည် နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားကို ဝင်ငွေနည်းသူ စီးနင်းသူများ သိပ်သည်းစွာ အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဘတ်စ်ကားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် မြို့ပတ်ရထားသည် ရန်ကုန်မြို့ ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးတွင် ဈေးအချိုဆုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်: Yangon Circular Railway
၄၅.၉ km (၂၈.၅ mi)
၁၀၀၀ mm (3 ft33⁄8 in)
၁၅.၃ km/h (၉.၅ mph)
မြို့ပတ်ရထားပြေးဆွဲချိန်သည် နေ့စဉ် မနက် ၃ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှ ည ၁၀ နာရီ ၁၅ မိနစ်အထိ ဖြစ်သည်။ မြို့ပတ်ရထားလတ်မှတ်တန်ဖိုးမှ ၁၅ မိုင်အတွင်း အကွာအဝေးကို ၂၀၀ ကျပ် (~eighteen US cents)နှင့် ၁၅ မိုင်အထက်အကွာအဝေးကို ၄၀၀ ကျပ် (~37 US cents) ကျသင့်သည်။ရထားလက်မှတ်များကို ပုံသေ ၁၀၀ ကျပ်ဖြင့် မြို့ပတ်ရထားလမ်းရှိ ဘူတာများအားလုံးတွင် ရောင်းချပေးသည်။ ရန်ကုန်ဘူတာကြီးတွင် စင်္ကြန်အမှတ် ၇ ရှိ စင်္ကြန်ပေါ်၌ လက်မှတ်ရောင်းသော ရုံငယ်တစ်ခု တည်ရှိပြီး အဆိုပါဘူတာရုံမှ မြို့ပတ်ရထားအတွက် လတ်မှတ်များကို ရောင်းချပေးသည်။
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းကို ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်တွင် ဗြိတိသျှတို့မှ တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အသွားအပြန် နှစ်လမ်းသွားရထားလမ်းကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသည် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်းကို ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်မည်ဟု ကြေငြာခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရမှ ဦးစီးသောစနစ်သည် အရှုံးပြနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားအတွက် အစိုးရမှ လစဉ်ကုန်ကျငွေ ၂၆၀ မီလီယံ ကျပ်ငွေ(US$325,000) ကုန်ကျပြီး ပြန်လည်ရရှိသော ဘဏ္ဍာငွေ ၄၂ မီလီယံကျပ် (US$52,500) သာရှိသည်။ မြို့ပတ်ရထားလတ်မှတ်သည် ဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့် ဈေးနှုန်းချိုသာလျက်ရှိသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာတွင် Japan International Cooperation Agency နှင့် ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်သော မဟာရန်ကုန်ဒေသ ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေး master plan တွင် အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည့်အချက်များ ပါဝင်သည်။
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားကွန်ယက်တွင် ဘူတာရုံ ၃၉ ခု ပါဝင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၏ ဒေသအသီးသီးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
မြို့ပတ်ရထားပတ်လမ်း အစသည် ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမှ ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အနီး မင်္ဂလာဒုံဘူတာအထိဖြစ်သည်။ ထိုမှတဆင့် အင်းစိန်မှ အနောက်ဘက်သို့ ဥက္ကလာပမှ အရှေ့ဘက်သို့ ဆက်လက်မောင်းနှင်သည်။
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ရန်ကုန်) ဘူတာ
ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလမ်း (၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီ)
↑ "Inter-states and regions railroad tracks all heading to Nay Pyi Taw" (2010-10-15)3(30).
↑ Yeni။ "The Railway Bazaar"၊ The Irrawaddy၊ 2008-01-30။
↑ "Third Regional EST Forum: Presentation of Myanmar" (17–19 March 2008). Singapore: Ministry of Transport, Myanmar.
↑ Shwe Gaung၊ Juliet။ "Passengers hope privatisation brings better services"၊ Myanmar Times၊ 1 August 2011။ 13 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Moe Thida (March 2012)။ Yangon Circular Railway Development Project။ raSPP Policy Research Paper E 1-2-001။ University of Tokyo။ 13 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "13 Coaches from Japan Arrived for Yangon Circular Railway" (in Burmese) (2011-01-04).
↑ Codrington၊ Stephen (2005)။ Planet Geography။ Solid Star Press။ p. 568။ ISBN 9780957981935။
↑ Etherton၊ David; Terry Standley (May 1990)။ Human Settlements Sector Review: Union of Myanmar (အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့်)။ United nations Centre for Human Settlements။ p. 71။ ISBN 9789211311280။
↑ Win Ko Ko Latt။ "Rail privatisation drive continues"၊ Myanmar Times၊ 1 August 2011။ 13 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Yangon’s rail network to be privatised"၊ Myanmar Times၊ 25 July 2011။ 13 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Mudditt၊ Jessica။ "Waiting for the train: upgrading the Yangon circle line"၊ Myanmar Times၊ 25 March 2013။ 13 September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Yangon Circular Railways Schedule။ Minami Tours။ 2009-01-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား&oldid=403447" မှ ရယူရန်
၂ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၃:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂ ဇွန် ၂၀၁၈၊ ၁၃:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။